Thelekisa umahluko phakathi kweQGIS kunye neArcGIS-Geofumadas
Agasti, 2015 ArcGIS-ESRI, qgis
Abahlobo beGISGeography.com benze ixabiso elixabisekileyo apho baqhathanisa ne-GQIS ne-ArcGIS, kungabikho ngaphantsi kwezihloko ze-27.
Kucacile ukuba ubomi bawo omabini amaqonga abuthongo, kuthathelwa ingqalelo ukuba imvelaphi ye-QGIS ibuyele kunyaka ka-2002, kanye xa kuphume uzinzo lokugqibela lweArcView 3x ... esele ibandakanya ukuhamba.
Ngaphandle kwamathandabuzo, asikaze sikubone ukukhula kunye nokuthatheka komcimbi weGeospatial njengalowo ufumanekayo kubasebenzisi bezisombululo zimbini. Kwelinye icala, i-ESRI ixhaswe ngumgaqo wabucala wenkampani eneminyaka engaphezulu kwama-40 isemarikeni, ngokufaneleka kokuba ibe sisikhululo esize ukuqaqambisa umbono wendawo malunga nentengiso kunye nembono yoluntu engabalulekanga; Ngelixa i-QGIS lelona nyathelo lolwalathiso kwindlela ye-GIS, ekwaziyo ukuthatha ithuba lakho konke okusemandleni kwimodeli ye-OpenSource, ukumisela uluntu olukhokelwa kungekuphela ngamavolontiya kodwa kwinqanaba eliphezulu lobungcali.
Ngokuqhelekileyo, ukuthelekisa kusinika izibane ezinomdla kwizinto ezinje:
1. I-QGIS inendlela yokuvuleleka kulo naluphi na uhlobo lwedatha.
2. Bobabini bafuna ukwenza lula umaleko wentetho yomsebenzisi wokugqibela, nangona nge-QGIS akukho lula kangako ukuba sijonga ukuba ubutyebi ziiplagi.
3. Ukuhlolwa kwedatha phakathi kwe-QGIS Browser kunye ne-ArcCatalog kunomdla, kodwa bayasilela nje ukuba baxhomekeke kubukho beemethadatha. Kuhlala kunzima ukukhangela kwidatha.
4. Ukudibanisa iitafile kuyasebenza kuzo zombini, kunenzuzo encinci yeQGSIS.
5. Ukuphinda uguqule kwaye utshintshe inkqubo yokulungelelanisa. Zombini zamkelekile kubhabho kunye nokusingathwa koqikelelo lwendalo, nangona iinzuzo kukuba iQGIS ekugqibeleni ikwazile ukufunda uqikelelo kwifayile yePRPR ngaphandle kweempazamo.
6. Inqokonqoko yedatha ekwi-Intanethi kwi-ArcGIS kwi-Intanethi ngumba olindelekileyo we-QGIS othi nge-OpenLayers iplagi ivumela iindawo ezininzi ezingasemva kodwa akukho nto ingako ininzi.
7. Inkqubo ye-Geoprocessing idlulisiwe yi-QGIS, kodwa hayi kuba i-ArcMap ingenayo, kodwa ngenxa yokuba ixhomekeke kuhlobo lwelayisensi ekhoyo, ukuze kusetyenziswe imisebenzi eyahlukeneyo. Ewe, phakathi kwezixhobo ezininzi kunokwenzeka ukuba ulahleke ngaphambi kokuba uzizame zonke, ukuba sijonga zonke iinkqubo zokwenza umsebenzi ze-GRASS kunye ne-SAGA, esinokuthanda ukuba nazo ikiti enye.
Ewe kunjalo, le yimeko engasasebenziyo nomthamo wesoftware kodwa kunye nemodeli yeshishini. Njengoko i-QGIS inelayisensi ye-GPL, yonke into iyafumaneka.
8. Ilizwe leeplagi libanzi kumaqonga omabini. Nangona i-QGIS ibanzi kakhulu kule nto, apho kukho iiplagi phantse kuyo yonke into, into enzima yile ArcGIS Marektplace yenza lula, kuba kukho izisombululo zayo yonke into enendlela ekhethekileyo ekufumanekayo. Ewe kufuneka uhlawule.
Nangona i-AGIS ngumatshini osebenza ngokuzimela, ayikho inxaxheba epheleleyo yezixhobo ze-ESRI ezizodwa.
9. Ulawulo lwedatha ekhawulezileyo idlulwa yi-ArcGIS. Nangona i-QGIS + GRASS inika idabi, kuhlala kukho into iArcGIS eyenza kube lula kuwe; ukuba akunjalo ngamaxabiso ongezelelweyo, ngobunzima bokuhambelana kweeplagi ngokubhekisele kwiinguqulelo zamva nje.
10. Izixhobo zeArcGIS zeGeostatistics azinakuthelekiswa. Azisebenzi kuphela, kodwa ziyafundisa.
11. Ngedatha yeLiDAR, kuya kufuneka ucinge, kuba ngelixa abanye becebisa ukuba iArcGIS igqithile, abanye bathi i-ESRI icinga ngokunyanzela eyayo ifomathi yokuziva kude.
Ndicebisa ukuba ndijonge kwaye ungeze kwiqoqo lakho, kuba inqaku elingaphaya kokufuna ukukhusela ithuluzi (eliya kubonakala libonakala libalaseleyo), lifanisa ukufana kwe-27 kwimibandela efana nale:
Ulawulo loKwenziwa koMsebenzi (uMakhi weModeli)
Iimveliso zokugqibela zemibala
Izichaso kunye nemiqondiso
Ukuzenzekelayo kwamaphupha aqhubekekayo
Ukulungiswa kwedatha yenkcazo
I-XY idibanisa kunye neCoding
Ukuguqulwa kweentlobo zejometri
Ngamafutshane, ngumsebenzi onzima okhokele kweli nqaku. Kwiindawo ezininzi ngokuqinisekileyo ifuna ubunzulu obungaphezulu, obusaziwa kuphela ngabo basebenzise yonke imisebenzi yeArcGIS kunye nesibindi seeplagi zeQGIS. Nangona kunjalo, kukho into eyonelisayo:
Asizange sibone i-epic yokulwa kwi-software ye-GIS njengaleyo esiyibonayo.
Ukufunda inqaku elipheleleyo, kubona ikhonkco.
Ngendlela, ndincoma ukuba ulandele i-akhawunti @GisGeography, ukuba siya kudibanisa Top40 Geospatial Twitter.
Post edlulileyo«Ngaphambilini IRejista kunye neCadastre kumxholo weNkqubo yoTshintsho kaZwelonke
Post Next I-Qgis-Umzekelo weendlela ezilungileyo kwimodeli ye-OpenSourceOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-2 "zokuthelekisa neyantlukwano phakathi kweQGIS kunye neArcGIS"
I-google iguqule i-sekali